I-Google iyigcina kanjani idatha esiyiqoqayo – Ubumfihlo kanye Nemigomo – I-Google
I-Google iyenza kanjani idatha ingaziwa
Siqoqa idatha njengoba usebenzisa amasevisi e-Google. Ukuthi siqoqa ini, kungani siyiqoqa, nokuthi ungaluphatha kanjani ulwazi lwakho kuchazwe Kunqubomgomo Yobumfihlo yethu. Inqubomgomo yokugcinwa ichaza ukuthi kungani sibambelela kuzinhlobo ezihlukile zedatha ngezikhathi ezihlukile.
Enye idatha ungayisusa noma kunini lapho uthanda, enye idatha isuswa ngokuzenzakalela, futhi enye idatha siyigcina izikhathi ezinde uma kudingeka. Uma ususa idatha silandela inqubomgomo yokususwa ukuze senze isiqiniseko sokuthi idatha yakho iphephile futhi isuswe ngokugcwele kusukela kumasevisi ethu noma igcinwa ngefomu elenziwe langaziwa. I-Google iyenza kanjani idatha ingaziwa
Ulwazi luyagcinwa uze ulisuse
Sinikeza ngamasevisi abanzi akuvumela ukuthi ulungise noma ususe idatha egcinwe ku-akhawunti yakho ye-Google. Isibonelo, ungakwazi:
Ukuhlela ulwazi lwakho siqu
Ukususa izinto kusukela kumsebenzi wami
Ukususa okuqukethwe okufana nezithombe namadokhumenti
Ukususa umkhiqizo kusukela ku-akhawunti yakho ye-Google
Ukususa i-akhawunti yakho ye-Google ngokugcwele
Sizogcina le datha ku-akhawunti yakho ye-Google uze ukhethe ukuyisusa. Futhi uma usebenzisa amasevisi ethu ngaphandle kokungena ngemvume ku-akhawunti ye-Google, siphinda sinikeze ngekhono lokususa olunye ulwazi oluxhunywe kokusebenzisela ukufinyelela kumasevisi ethu, njengedivayisi, isiphequluli noma uhlelo lokusebenza.
Idatha ephelelwa isikhathi ngemuva kwesikhathi esithile
Kwezinye izimo, kunokuthi sinikeze ngendlela yokususa idatha, siyigcina ngesikhathi esinqunywe ngaphambilini. Kuhlobo ngalunye lwedatha, sisetha ubude besikhathi bokugcinwa obususelwa kusizathu sokuqoqwa kwayo. Isibonelo, ukuze kuqinisekiswe ukuthi amasevisi ethu aboniswa ngokufanelekile kuzinhlobo eziningi ezihlukile zamadivayisi, singagcina ububanzi besiphequluli nobude kufikela kuzinyanga ezingu-9. Futhi sithatha izinyathelo zokwenza kungaziwa idatha ethile ngaphakathi kwezikhathi ezisethiwe. Njengesibonelo, senza kungaziwa idatha yokukhangisa kumalogi eseva ngokususa ingxenye yekheli le-IP ngemuva kwezinyanga ezingu-9 nolwazi lwekhukhi ngemuva kwezinyanga ezingu-18.
Ulwazi lugcinwa kuze kususwe i-akhawunti yakho ye-Google
Sigcina enye idatha impilo yonke ye-akhawunti yakho ye-Google uma iwusizo ukuthi isisize siqonde ukuthi abasebenzisi bahlanganyela kanjani nezici zethu nokuthi singawathuthukisa kanjani amasevisi ethu. Isibonelo, ngemuva kokuthi ususe usesho oluthile lwe-Google kusukela Kumsebenzi wami, kungenzeka sigcine ulwazi olumayelana nokuthi uvamise ukusesha kangakanani izinto, kodwa hhayi lokhu okuseshile. Uma ususa i-akhawunti yakho ye-Google, ulwazi olumayelana nokuthi uvamise ukuseshela kangakanani izinto nalo luyasuswa.
Ulwazi lugcinwa ngezikhathi ezingeziwe ngezinjongo ezikhawulelwe
Kwesinye isikhathi izimfuneko zebhizinisi nezomthetho zisiphoqa ukuthi sigcine ulwazi oluthile, ngezinjongo ezithile, ngezikhathi ezingeziwe. Isibonelo, uma i-Google icubungula inkokhelo yenzela wena, noma uma wenza inkokhelo eya ku-Google, sizogcina le datha ngezikhathi ezinde njengoba kudingeka kuzinjongo zentela noma ezokubalwa kwemali. Izizathu ezingenza ukuthi sigcine enye idatha izikhathi ezinde zifaka:
Ukuvikela, ukukhwabanisa nokuvinjelwa kokuhlukunyezwa
Ukugcinwa kwamarekhodi ezimali
Ukuthobelana nezimfunelo zezomthetho noma ezokuqondisa
Ukuqinisekiswa kokuqhubeka kwamasevisi ethu
Ukuxhumana okuqondile ne-Google
Ukunika amandla ukususwa okuphephile nokuphelele
Uma ususa idatha ku-akhawunti yakho ye-Google, siqala ngokushesha inqubo yokuyisusa kusukela kumkhiqizo nakumasistimu ethu. Okokuqala, sihlose ukuyisusa ngokushesha kusukela ekubukweni futhi idatha kungenzeka ingasatholakali ukuze yenziwe ngokwezifiso kumuzwa wakho we-Google. Isibonelo, uma ususa ividiyo oyibukile kusukela kudeshibhodi yokuthi Umsebenzi wami, i-YouTube izomisa ngokushesha ukubonisa ukuqhubeka kokubuka kwakho kwaleyo vidiyo.
Bese siqala inqubo edizayinelwe ukususa ngokuphephile nangokuphelele idatha kusukela kumasistimu ethu esitoreji. Ukususwa okuphephile kubalulekile ukuze sivikele abasebenzisi bethu namakhasimende kusukela ekulahlekeni kwedatha ngephutha. Ukuqedela kokususwa kwedatha kusukela kumaseva ethu kubaluleke ngokulinganayo ukuze abasebenzisi babe nokuthula emphefumulweni. Le nqubo ivamise ukuthatha phakathi kwezinyanga ezingu-2 kusukela esikhathini sokususwa. Lokhu kuvamise ukufaka kufikela kusikhathi sokubuyiselwa senyanga yonke uma ngabe idatha isuswe ngokungaqondiwe.
Isistimu ngayinye yesitoreji se-Google kusukela lapho kususwa khona idatha inenqubo yayo enemininingwane yokususwa okuphephile nokuphelele. Lokhu kungafaka ukudlula okuphindiwe kusistimu ukuze kuqinisekiswe ukuthi yonke idatha isusiwe, noma ukulibaziseka okumfushane kokubuyiselwa kusukela kumaphutha. Njengomphumela walokho, ukususwa kwesinye isikhathi kungathatha isikhathi eside uma kudingeka isikhathi esingeziwe ukuze kususwe ngokuphephile futhi ngokuphelele idatha.
Amasevisi ethu aphinde asebenzise isitoreji sesipele esibetheliwe njengesinye isendlalelo sokuvikelwa ukuze sisize ukubuyisela kusukela kuzinhlekelele ezingaba khona. Idatha ingahlala kulawa masistimu kufikela kuzinyanga ezingu-6.
Njengayo yonke inqubo yokususwa, izinto ezifana nokugcinwa komzila, ukucisha okungalindelwe, amaphutha, noma ukuhluleka kumaphrothokholi ethu zingabangela ukulibaziseka kuzinqubo nakuzikhathi ezibekiwe ezichazwe kule athikili. Sigcina amasistimu adizayinelwe ukuthola futhi sixazulula izinkinga ezinjalo.
Ukuze kuvikelwe wena, abanye abantu, ne-Google kusukela ekukhwabaniseni, ekuhlukunyezweni, nokufinyelela okungagunyaziwe.
Isibonelo, uma i-Google isola umuntu othile owenza ukukhwabanisa kwesikhangiso.
Uma i-Google iyingxenye yomsebenzi wezezimali, okufaka lapho i-Google icubungula khona inkokhelo yakho noma uma wenza inkokhelo eya ku-Google. Ukugcinwa kwesikhathi eside kwalolu lwazi kuvamise ukudingeka kuzinjongo zokubalwa kwezimali, ukulungiswa kwezingxabano nokuthobelana nentela, ukuthunyelwa kwezincwadi zentela, ukumelana nokushintshisana ngemali, neminye imithetho yezezimali.
Isibonelo, uma uthenga izinhlelo zokusebenza kusukela ku-Google Play Isitolo noma imikhiqizo kusukela ku-Google Store.
Ukuze kuhlangatshezwe noma imuphi umthetho osebenzayo, umthetho, inqubo yezomthetho noma isicelo esingasetshenziswa uhulumeni, noma esidingekayo ukuze kusetshenziswe Imigomo Yesevisi esebenzayo, efaka ukuphenywa kokuphulwa komthetho okungaba khona.
Isibonelo, uma i-Google ithola incwadi yokubizela enkantolo esemthethweni.
Ukuze kuqinisekiswe ukuqhubeka kwesevisi kuwe nakubanye abasebenzisi.
Isibonelo, uma wabelana ngolwazi nabanye abasebenzisi (okufana nalapho uthumele khona i-imeyili komunye umuntu), ukuyisusa kusukela ku-akhawunti yakho ye-Google ngeke kususe amakhophi agcinwe abamukeli.
Uma unokuxhumana okuqondile ne-Google, ngesiteshi sokwesekwa kwamakhasimende, ifomu lempendulo, noma umbiko wesiphazamisi, i-Google ingagcina amarekhodi azwakalayo walokho kuxhumana.
Isibonelo, uma uthumela impendulo ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-Google olufana ne-Gmail noma iDrayivu.